गायक दिनेश गौतमको ‘बाँसै काटेर’ मा भिमफेदी गाइज, कार्टुन क्रुज र एलिसा राइको उत्कृष्ट नृत्य, फुलन्देकी आमाको रमाइलो अभिनय - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
गायक दिनेश गौतमको ‘बाँसै काटेर’ मा भिमफेदी गाइज, कार्टुन क्रुज र एलिसा राइको उत्कृष्ट नृत्य, फुलन्देकी आमाको रमाइलो अभिनय
प्रकाशित: १३ पुष २०७५, शुक्रबार
काठमाडौँ । नेपाली सांगीतिक धरातलमा छुट्टै पहिचान बनाएका गायक दिनेश गौतमको ‘बाँसै काटेर’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘पैसा कसले बनायो’ गीत गाएपछि चर्चामा आएका दिनेशको स्वरमा सजिएको गीतमा भिमफेदी गाइज, कार्टुन क्रुज र एलिसा राईको नृत्य म्युजिक भिडियोमा रहेको छ । नेपाली नृत्य जगतमा चर्चित यी दुइ नृत्य समूह र एलिसाको संयोग भिडियोको बलियो पक्ष बनेको छ ।
संगीतकार तथा संगीतकार संघका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण शेषले गायन देखि नृत्य र भिडियो निर्देशनको उत्कृष्ट नमूनाको रुपमा यस म्युजिक भिडियोलाई लिन सकिने बताए । नेपालको पहिलो सेक्सोफोन वादक शुभ बहादुर सुनामले दिनेशको संगीत साधना र गायकीको प्रशंसा गरे ।
करिब दुइ दशकदेखिको संगीत यात्रामा दिनेशले गाएका गीतभन्दा ‘बाँसै काटेर’ बिलकुलै भिन्न छ । समयको माग अनुसार केहि फरक शैलीको गीत प्रस्तुत गर्न डान्सिङ नम्बर गाएको दिनेशले बताए । २०५६ सालदेखि संगीतमा निरन्तर लागि परेका दिनेशका एघार वटा सांगितिक एल्बम बजारमा आइसकेका छन् । दुइ दशकको दौरानमा उनले एल्बम र चलचित्रमा गरेर दुइ सय भन्दा बढि गीत गाइसकेका छन् । दिनेशको संगीतमा भारतीय गायक शान र राजा हसनले समेत गीत गाइसकेका छन् । ‘पैसा कसले बनायो’ गीत गाएपछि चर्चामा आएका दिनेशको एक महिना अघि मात्रै ‘फर्केर आएन मायालु’ गीत सार्वजनिक भएको थियो ।
कोशिस क्षेत्रीको शब्द संगीत रहेको ‘बाँसै काटेर’ गीतको एरेन्जमेन्ट उदयराज पौडेलले गरेका छन् । ‘भिमफेदी गाइज’का टिम लिडर निर्मल लामाको निर्देशनमा तयार भएको भिडियोमा रोचक प्रस्तुती ‘फुलन्देकी आमा’ को रहेको छ । म्युजिक भिडियोमा ‘आरी डान्स’, ‘थाली डान्स’ देख्न पाइन्छ । भिडियोको सम्पादन पवन सुस्लिङले गरेका हुन् । युट्युबमा सार्वजनिक भएको पहिलो दिनमै गीतले उत्साहपूर्ण दर्शक बटुल्न सफल भएको छ ।
थुप्रै सदाबहार गीतका धनी लोकगायक बुद्धिकृष्ण लामिछानेको निधन ! बाल्मिकेश्वर आर्यघाट दाहसंस्कार गरियो
रुचाइयो ‘आउन ओर ओर’, युट्युवमा अधिक तारिफयुक्त कमेन्ट !
डश म्युजिकको “प्राण पियारी” मा पुजा र आकाश
गीतकार जूनको शब्द र आचार्यको संगीतमा राजेश र मेलिनाले गाए चलचित्रको गीत
‘पिपलु’ मा अस्मिता र नाजिरको रोमान्स
नेपालमै पहिलोपटक सांगीतिक ब्याण्डहरुबीच रियालिटी शो ‘द ब्याण्ड च्याम्पियन नेपाल’ हुने
केकी अभिनित रानीको ‘सुनसान मन’ चर्चामा
परदेशी–२ को सकियो छायाँकन, प्रदर्शन २०७८ सालको दशैंमा